Waftigii Uu Horacayay Madaxwaynaha DDSI Iyo Xadhig-jarkii Diyaarinta Mashruuca Waraabka Galbeedka Godey Ee Degmada Beercaano. - Cakaara News
Waftigii Uu Horacayay Madaxwaynaha DDSI Iyo Xadhig-jarkii Diyaarinta Mashruuca Waraabka Galbeedka Godey Ee Degmada Beercaano.
Beercaano(CN) Axad.Dec.21.2014, waftigan uu horkacayay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa todobaadkan kormeer hawleed kumaraya deegaano badan oo uu madaxwaynuhu dul istaagayo mashaariicaha dhamaaday, sida ay u socdaan, kuwa mustaqbalka iyo wadatashi uu kala yeelanayo shacabka deegaanadaasi.
Waftiga oo habeenkii labaad ee xalay u hoyday magaalada Godey ee xarunta gobolka Shabeele, islamarkaana gaadhay goobo badan oo uu madaxwaynuhu diirada saarayay heerka horumar iyo mashaariicaha kasocda gobolka Shabeele ayaa saaka u anbabaxay dhinaca degmada Beercaano ee gobolka Shabeele.
Madaxwaynaha ayaa si qoto dheer u kormeerayay habsami u socodka mashaariicaha galbeedka Godey ee Beercaano
kaasoo uu madaxawaynuhu xadhiga kajaray diyaarinta gabi ahaanba mashruucan galbeedka Godey oo isugu jiray 3 qaybood, islamarkaana ay ku baxday miisaaniyad dhan 212 milyan oo birr. Kanaalka wayn oo gaadhaya 13.6 KM ayaa haatan diyaar u ah inuu waraabiyo dhul beereed dhan 27 hektaar, halka wakhti xaadirkan laga isticmaalo afar kun oo hectaar oo soo saara dalagyo kala duwan oo ay kamidyihiin khudaarta, bariiska, sinsinta, galayda, iyo noocyo kala duwan.
Wuxuuna sheegay madaxwaynuhu in mashruucan oo haatan dabagalkiisa iyo ilaalintiisaba laxoojinayo uu kaalin muhiima ugu fadhiyo tirtirada saboolnimada guud ahaan dalka gaar ahaana deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Kormeerka hawlaha horumarka kasakow waxaa uu madaxwaynuhu la kulamayay bulsha waynta kudhaqan deegaanadaasi ay kasocdaan mashaariicaha waawayn ee dhulbeereedka iyo waraabka ah. Shacabka kunool tuulada Raran oo ah goobta uu salka kuhayo mashruuca galbeedka Godey ayuu madaxwaynuhu si qoto dheer ugala hadlay shacabka in ay sida loogu talagalay uga faa'idaystaan islamarkaana ay noqdaan shacab waxsoosaarkoodu uu gaadho Itoobiya oo dhan iyo caalamkaba maadaama ay kuhaboontahay dawladu ay dadaal dheer galisay.
Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar oo aad u dhiiri galinayay in uu shacabku noqdo mid waxsoosaar badan leh ayaa mar uu lajoogay beeralayda kuboorinayay in ay badiyaan dalagyada iyo waxsoosaarka suuqa leh ee dhaqaalahooda iyo noloshaba kor u qaadaya.
Shacabka beeralayda ah ayaa iyaguna dhankooda uga mahadceliyay dadaalka xukuumada iyagoo balan qaaday inay sida ugu haboon uga faa'idaysan doonaan mashruucan galbeedka Godey islamarkaana ay badaniyaan noocyada waxsoosaarkooda.
Madaxwaynaha iyo waftigan wahelinaysa ayaa lafilayaa in ay dib ugasoo anbabaxaan gobolka Shabeele iyadoo uu madaxwaynuhu sidoo kale indho indhaynayo adeegyada magaalada Godey iyo baahiyaha horumar ee mustaqbalka. Sidoo kale waxaa xalay magaalada Godey riwaayado iyo dhaantooyinba kadhigay kooxaha fanka, dhaqabka iyo hidaha ee DDSI.
Socdaalkan madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar oo aan fadhi iyo nasniinyo lahayn ayaa isugu jira kormeerka hawlaha horumarka, xadhig jarka iyo indho-indhaynta mashaariicaha iyo wadatashiga hawlaha horumarka ee bulshada kudhaqan goboladaasi uu madaxwaynuhu todobaadkan kormeerayo. Waxaana wadooyinka iyo goobaha uu madaxwaynuhu marayo kamuuqanaya dadwaynaha oo wata calanka kuna dhawaaqaya erayo xanbaarasan taageerada iyo kalsoonida madaxwaynaha ee ay u qabaan shacabku.